ဒိုးမယ် - Page 34 of 38 - နေရာသစ်များကို ရှာဖွေကြပါစို့!
Disney ရုပ်ရှင်ထဲမှ စားစရာများ။
Disney ကာတွန်းကားလေးတွေကို ကလေးတွေရောလူကြီးတွေပါ တော်တော်များများကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ကာတွန်းကားထဲက ဇာတ်ကောင်တွေကို အချိန်မရွေး မှတ်မိနေကြပေမယ့် ကာတွန်းကားထဲက အစားအစာတွေကိုရော သတိထားမိကြရဲ့လား?တော်တော်များများကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲ ကြည့်မိကြမှာဆိုတော့ အတူတကွပြန်လည်တူးဖော်ကြည့်ကြရအောင်။ (၁)The Princess and the Frogဇာတ်ကားထဲမှ Beignetsမုန့် Photo credit:Disney / Via...
မြန်​မာဟင်​းလျာ​တွေဘယ်​နှမျိုးရှိမယ်​ထင်​သလဲ? မြန်​မာအစားအစာဆိုသည်​မှာဟင်​းလျာ​တွေ​ပေါ်မှာမတူညီတဲ့နားလည်​မှု​တွေ​ပေါ်မှာအ​ခြေခံထားတာဖြစ်​ပါတယ်​။မြန်​မာ့ဟင်​းလ​ျာတိုင်​းမှာအဓိကပါဝင်​ပစ္စည်​းက​တော့ကြက်​သွန်​နီ(ဟင်​းအနှစ်​နဲ့ဟင်​းပွဲရဲ့အဓိကအရသာကို​ထောက်​ပံ​့​ပေး​သောပင်​မအရာ​),အိန္ဒိယဟင်​းခက်​အ​မွှေးအကြိုင်​နဲ့ငရုတ်​သီးမှုန်​့​တွေပဲဖြစ်​ပါတယ်​။များ​သောအားဖြင်​့ ငါးနဲ့အသားဟင်​းလျာ​တွေက​တော့ မြန်​မာ​တွေရဲ့​ကျော်​ကြားလှတဲ့ဟင်​းပွ​ဲ​တွေပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ မြန်​မာဟင်​းလျာ​တွေမှာ​ငါးမှပြုလုပ်​ထား​သော ငံပြာရည်​ ငါးပိ​တွေကိုများစွာအသုံးပြု​လေ့ရှိကြပါတယ်​။မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့တည်​​နေရာ ပထဝီ​ဗေဒအရ မြန်​မာဟင်​းလျာ​တွေမှာ အိမ်​နီးချင်​းနိုင်​ငံ​တွေဖြစ်​တဲ့ တရုတ်​နဲ့ အိန္ဒိယဟင်​းလျာ​တို့ရဲ့ လွှမ်​းမိုးမှု​ကိုလဲ​တွေ့မြင်​နိုင်​ပါတယ်​။ မြန်​မာဟင်​းလျာ​တွေကိုအဓိကအားဖြင်​့နှစ်​ပိုင်​း-​မြောက်​အိန္ဒိယနှင်​့ပါကစ္စတန်​စတိုင်​ ပူပူစပ်​စပ်​ဟင်​းလျာများနှင်​့ ချိုချိုစိမ်​့စိမ်​့ဟင်​းလျာများဟူ၍ခွဲထားပါတယ်။ ဟင်​းချက်​ရာမှာပုံမှန်​ပါဝင်​ပစ္စည်​း​တွေက​တော့ကြက်​သွန်​နီ,ကြက်​သွန်​ဖြူ,ငရုတ်​သီးအနှစ်​တို့ပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အခြားဟင်​းခတ်​ပစ္စည်​း​တွေအဖြစ်​ မဆလာ,ငရုတ်​သီးအမှုန်​့,ဇီယာမှုန်​့,နနွင်​း,ငပိ နှင်​့ ပုစွန်​​ခြောက်​မှုန်​့တို့ဖြစ်​ပါတယ်​။မြန်​မာဟင်​းလျာ​တွေမှာ များ​သောအားဖြင်​့...
ဟော့ပေါ့ဆိုတာ ကျန်းမာရေးနှင့် သင့်တော်တဲ့ အစားအစာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အရသာကောင်းမွန်လှတဲ့ ဟော့ပေါ့ဆိုတာဟင်းရည် ပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့ စွဲမက်ဖွယ် ဟော့ပေါ့ အရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဟော့ပေါ့ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေး တစ်ဆိုင်ကို “Doemal” က ဟော့ပေါ့ ချစ်သူတွေအတွက်...
ဒီဟင်းတွေအားလုံးကို စားရဲရင် ဆရာပဲ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာသူ့ဒေသနဲ့သူ့ သူဓလေ့နဲ့သူစားသုံးကြတဲ့ အမြင်ဆန်းပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အစားအသောက်များစွာရှိပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ ထူးထူးခြားခြားအစားအသောက်အချို့ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Someone ate this but who?->> Read in English ငါးအကျက်တစ်ပိုင်းအရှင်တစ်ပိုင်းဟင်း ယင်ယန်းယုလို့ခေါ်တဲ့ ငါးအကျက်တစ်ပိုင်းအရှင်တစ်ပိုင်းဟင်းလျာကတော့ တရုတ်ပြည်ရဲ့အရှင်လတ်လတ်စားရတဲ့ဟင်းလျာတွေထဲက နာမည်ကြီးဟင်းလျာတစ်ခုပါ။ ငါးအကျက်တစ်ပိုင်းအရှင်တစ်ပိုင်းဟင်းလျာလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ ငါးရဲ့ကိုယ်ထည်ကိုကျက်အောင်ကြော်ပြီး ခေါင်းပိုင်းကိုတော့အရှင်ထားထားတာပါ။ ဘယ်လိုချက်လဲဆိုတော့...
သစ်ပင်တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် တကယ်ကို အရေးပါလှပါတယ်။ သစ်ပင်တွေက အရိပ်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊သစ်သား၊ ဆေးဝါး၊ အစားအစာ နှင့် အောက်ဆီဂျင် အစရှိတဲ့ လူသားတွေ နေ့စဉ် လိုအပ်တဲ့ အရာတော်တော်များများကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရာသီဥတု မျှတစေရန်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ...